बाइबलका कथाहरू: गिदोन र उसका ३०० मान्छे - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
चित्रमा के हुँदैछ, हेर। यिनीहरू सबै इस्राएलका सिपाहीहरू हुन्। उनीहरू घोप्टो परेर पानी पिउँदैछन्। छेउमा उभिरहेको मान्छेचाहिं न्यायकर्ता गिदोन हो। आफ्ना सिपाहीहरूले कसरी पानी पिउँछन्, ऊ हेरिरहेको छ।
तिमी पनि मान्छेहरूले कसरी पानी पिउँदैछन् हेर त। केहीले पानीसम्मै मुख लगेर पिइरहेका छन्। एक जनाले चाहिं पानी आफ्नो हातमा लिएर पिउँदैछ। ऊ आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ भनेर पनि हेरिरहेको छ। यहोवाले वरिपरि हेर्दै पानी पिउने मान्छेहरू मात्र रोज्न लगाउनुहुन्छ। बाँकीलाई उहाँले घर फर्कन लगाउनुहुन्छ। किन तिमीलाई थाह छ?
इस्राएलीहरू फेरि ठूलो संकटमा परेका छन्। किनभने उनीहरूले यहोवाको आज्ञा पालन गरेनन्। इस्राएलीहरूभन्दा शक्तिशाली मिद्यानका मान्छेहरूले अहिले उनीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। यसकारण इस्राएलीहरूले यहोवालाई पुकार्छन्। यहोवाले उनीहरूको पुकारा सुनेर मदत गर्नुहुन्छ।
यहोवाले गिदोनलाई फौज तयार गर्न लगाउनुहुन्छ। त्यसकारण गिदोनले ३२,००० मान्छे जम्मा गर्छ। तर इस्राएलीहरूसित लड्न भनेर १,३५,००० शत्रु सिपाहीहरू आइसकेका हुन्छन्। तैपनि यहोवाले गिदोनलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘तँसित धेरै मान्छे भयो।’ यहोवाले किन त्यसो भन्नुभएको होला?
किनभने इस्राएलीहरू धेरै भए भने उनीहरूले आफ्नै शक्तिले मिद्यानीहरूलाई जितेको भन्ठान्न सक्छन्। उनीहरूले यहोवाको मदत चाहिंदैन भनी सोच्न सक्छन्। त्यसकारण यहोवाले गिदोनलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘जस-जसलाई लडाइँ गर्न डर लागिरहेको छ, उनीहरू सबैलाई घर फर्कन भनिदे।’ गिदोनले त्यसो गर्दा २२,००० मान्छेहरू घर फर्कन्छन्। अब १,३५,००० मिद्यानी सिपाहीहरूसित लड्न गिदोनसित १०,००० मान्छे मात्र हुन्छन्।
तर यहोवाले फेरि यसो भन्नुहुन्छ: ‘तँसित अझ धेरै मान्छे भयो।’ उहाँले गिदोनलाई खोलामा इस्राएलीहरूलाई पानी पिउन लगाउन अह्राउनुहुन्छ। जस-जसले खोलासम्मै मुख लगेर पानी पिउँछ, उनीहरू जम्मैलाई यहोवाले घर फर्कन लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि यहोवाले ‘यताउता हेर्दै पानी पिउने ३०० जना मान्छेद्वारा विजयी तुल्याउँछु’ भनेर गिदोनसित प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ।
गिदोनले आफ्ना ३०० जना सिपाहीहरूलाई तीन समूहमा विभाजित गर्छ। उसले हरेक सिपाहीलाई एउटा तुरही र एउटा गाग्रो दिन्छ। अनि उनीहरू सबैलाई गाग्रोभित्र बलिरहेको राँको बोक्न लगाउँछ। मध्यरातमा उनीहरूले शत्रुको छाउनीलाई चारैतिरबाट घेर्छन्। तब सबैले एकै चोटि आ-आफ्ना तुरही फुक्छन्, गाग्रो फुटाउँछन् र यसो भन्दै कराउँछन्: ‘यहोवाको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरबार!’ सुतिरहेका शत्रु सिपाहीहरू अलमलमा परेर डराउँछन्। उनीहरू सबै भाग्न थाल्छन्। यसरी इस्राएलीहरूले मिद्यानीहरूलाई लडाइँमा हराउँछन्।
न्यायकर्त्ता अध्याय ६ देखि ८ सम्म।
इस्राएलीहरू किन अनि कसरी ठूलो संकटमा पर्छन्?
किन यहोवाले गिदोनसित भएका मान्छे धेरै भयो भन्नुहुन्छ?
डराउनेहरू जतिलाई घर फर्कन भनेपछि गिदोनसित कति जना मान्छे बाँकी हुन्छ?
यहोवाले कसरी गिदोनका सिपाहीहरूलाई घटाएर ३०० जना पुऱ्याउनुहुन्छ, चित्र हेरेर बताऊ।
गिदोनले आफ्ना ३०० मान्छेलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ अनि इस्राएलीहरू कसरी युद्ध जित्छन्?
न्यायकर्त्ता ६:३६-४० पढ्नुहोस्।
यहोवाको इच्छा के हो भनेर गिदोनले कसरी पक्का गऱ्यो?
यहोवाको इच्छा के हो भनेर हामी अहिले कसरी थाह पाउन सक्छौं? (हितो. २:३-६; मत्ती ७:७-११; २ तिमो. ३:१६, १७)
न्यायकर्त्ता ७:१-२५ पढ्नुहोस्।
सतर्क भएर बस्ने गिदोनका ३०० सिपाहीबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (न्याय. ७:३, ६; रोमी १३:११, १२; एफि. ५:१५-१७)
गिदोनका ३०० सिपाहीले गिदोनलाई हेरेर सिकेझैं हामीले पनि महान् गिदोन, येशू ख्रीष्टलाई हेरेर के सिक्न सक्छौं? (न्याय. ७:१७; मत्ती ११:२९, ३०; २८:१९, २०; १ पत्रु. २:२१)
यहोवाको संगठनमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीसित सन्तुष्ट भएर सेवा गर्न न्यायकर्त्ता ७:२१ ले कसरी मदत गर्छ? (१ कोरि. ४:२; १२:१४-१८; याकू. ४:१०)
न्यायकर्त्ता ८:१-३ पढ्नुहोस्।
कुनै भाइ अथवा बहिनीसित मनमुटाव हुँदा गिदोनले एप्रैमीहरूसितको खिचातानी सुल्झाएझैं हामी पनि कसरी सुल्झाउन सक्छौं? (हितो. १५:१; मत्ती ५:२३, २४; लूका ९:४८)